Ugaas Xasan: Madaxweynaha waxaanu la socodsiineynaa macalimiintii inay hadda jiifaan, wayna soo kici doonaan | Baydhabo Online
Ugaas Xasan: Madaxweynaha waxaanu la socodsiineynaa macalimiintii inay hadda jiifaan, wayna soo kici doonaan
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble, ayaa dardaaran adag u jeediyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo).
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo si maldahan ula hadlay Madaxweynaha Somaliya, ayaa sheegay in waxa uu ugu yeeray macalimiintii ay hadda jiifaan, isla-markaana ay soo kici doonaan.
“Madaxweynaha waxaanu la socodsiineynaa macalimiintii inay hadda jiifaan, wayna soo kici doonaan, Ilaahay hakuu fududeeyaa leenahay. Hawl yarna inaysan ku sugeynin la soco Mudane Madaxweyne.” Ayuu yiri Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Ugaas Xasan oo Jimcihii ka hadlaayay kulan lagu taageeraayay Madaxweynaha la doortay, kana dhacay Magaalada Baledweyne, ayaa tilmaamay inaysan dadku ahayn sidii uu ku ogaa, iyadoo uu intaa ku daray la’isku deyi doono in dowladiisa la fashiliyo.
“Dadkanu dadkii aad ogeyd maaha, is bedel badanaa jiro, miririq badanaa jirto, wax badanaa la’isku deyaa in lagu jilaafeeyo, oo mid, laba iyo saddex ahayn. Rukumo badan inay kuu yaaliin laamiga uun ogow.” Ayuu yiri Ugaas Xasan.
Hadalka Ugaas Xasan, ayaa laga dhadhansan karay in uu ku weeraraayay Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynihii hore ee Somaliya iyo xertiisii Dam Jadiid.
Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dam Jadiid, ayaa burburiyay rajadii ay dadka reer Hiiraan ku taamayeen, ee ahayd in laba gobol loo qaybiyo gobolkaasi, ka hor inta aan Hiiraan wax ku darsan Gobolka Shabellaha Dhexe iyo in gogoshii maamul u samaynta labadaasi gobol la dhigo Baledweyne.